Bago – Department of Medical Service
Posted on January 15, 2020 February 29, 2020 by nay win aung
ပဲခူးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အနေဖြင့် Both Clients and Provider’s Satisfaction ရရှိနိုင်စေရန် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှု၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့၏ အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှု၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒေသခံပြည်သူများ၊ အလှူရှင်များ၊ ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့များ၏ ပူးပေါင်းကူညီမှုတို့ဖြင့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လူနာများ၊ လူနာရှင်များအပါအဝင် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၊ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများအပါအဝင် ဆေးရုံဝန်ထမ်းများ အပြန်အလှန်နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊ ချစ်ခင်လေးစားမှု ပိုမိုတိုးတက်ရရှိစေရန်အတွက်... Read More | Share it now!
Posted on January 8, 2020 February 29, 2020 by nay win aung
၇၂-နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ထူးချွန်စွာဆောင်ရွင်နိုင်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများအား ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ရာ ကျန်းမာရေးကုသစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ဆေးရုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတော်အစိုးရသစ်၏ “ပြည်သူနဲ့အတူ” ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ၂၄-နာရီပတ်လုံး ပိတ်ရက်မရှိကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ပဲခူးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ အဆင့်ဆင့်သောဆေးရုံ ဝန်ထမ်းများအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ “ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ” ဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ... Read More | Share it now!
ခုတင် (၁၀၀)ဆံ့ ဖြူးပြည်သူ့ဆေးရုံ
Posted on May 29, 2019 by Author 2
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) ဖြူးမြို့၊ ခုတင် (၁၀၀)ဆံ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသည် ဆေးရုံရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတွင် တည်ရှိ ပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် အမှတ် (၃၀၆) ခြေမြန်တပ်ရင်း (အဟောင်း)၊ တောင်ဘက်တွင် ဘောလုံးကွင်းရပ်ကွက်၊ အနောက်ဘက်တွင် ဆေးရုံပိုင်းရပ်ကွက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် အမှတ် (၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတို့ ရှိပါသည်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ (က) ဒေါက်တာဖြိုးဝေဝင်း (ဆေးရုံအုပ်) ၀၉-၂၀၂၇၆၉၃ (ခ) ဒေါ်မို့မို့သဲ(စာရင်းကိုင် – ၂) ၀၉-၇၉၇၁၂၃၉၁၇ (ဂ) ဒေါ်မင်းမင်းထက် (စာရေးအဆင့်-၁) ၀၉-၉၇၃၂၃၅၂၇၅ ၃။ ... Read More | Share it now!
Posted on April 29, 2019 by Author 2
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) – ရွှေကျင်မြို့၊ ကျွဲတဲရပ်ကွက်တွင်တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ဆေးရုံလမ်း၊ အနောက်ဘက်တွင် ရေအားလမ်း၊ တောင်ဘက်တွင် လမ်းသွယ်တစ်ခုနှင့် မြောက်ဘက်တွင် လမ်းသွယ်တစ်ခု ရှိပါသည်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် – ၀၅၅၂၂၃၀၀၃၀ Fax No. – ၀၅၅၂၂၃၀၀၃၀ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ – Medical Surgical OG Child Radiology Laboratory ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄. ၁)General OPD Timetable နေ့စဉ်နံနက်(၉: ဝဝ မှ ၁၂:၀၀)ထိ နေ့လည်(၁၄:၀၀ မှ ၁၆:၃ဝ)နာရီထိ (၄. ၂)Specialist OPD Timetable သားဖွားမီးယပ် – တနင်္လာ (အသစ်)၊... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) – ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် – ၀၅၅၂၂၃၀၀၃၀ Fax No. – ၀၅၅၂၂၃၀၀၃၀ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ – Medical Surgical OG Child Radiology Laboratory ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄. ၁)General OPD Timetable နေ့စဉ်နံနက်(၉: ဝဝ မှ ၁၂:၀၀)ထိ နေ့လည်(၁၄:၀၀ မှ ၁၆:၃ဝ)နာရီထိ (၄. ၂)Specialist OPD Timetable သားဖွားမီးယပ် – တနင်္လာ (အသစ်)၊ ကြာသပတေး(ဟောင်း) သမားတော် – အင်္ဂါ(အသစ်)၊ ကြာသပတေး(ဟောင်း) ခွဲစိတ် – အင်္ဂါ(အသစ်)၊ ကြာသပတေး(ဟောင်း) ကလေး – ဗုဒ္ဓဟူး အရိုး/အကြော – ဗုဒ္ဓဟူး... Read More | Share it now!